Aabo, ma maantoon baaba’nay ayaad na soo raadisay hooyadeenna ay ku jirto isbitaalka dhimirka? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Xaliimo iyo Xassan oo aan sheekadii dhameynin, ayaa waxaa albaabkii soo garaacay askeri boolis ah oo raadinaya Maxamed. Sedexdii magac oo Maxamed ayuu sheegay askerigu sheegay, waxa uuna weydiiyay inuu Maxamed gurigaan degan yahay. Hooyo Xaliimo markii ay Booliska aragtay ayey afka furatay oo ay oohin iyo qeylo isku dartay oo waxa ay tiri “aniga hadalkeyga diidaye Xassanow, bal fiiri heerka uu marayo” intaas markii ay tirina wey miir beeshay. Aabo Xassan oo yaaban iyo askerigii ayaa billaabay inay ambalaas u wacaan Xaliimo si gargaar degdeg ah loogu sameeyo. Xassan talaa ku cadaatay, hadana weli waxa uu leeyahay; “islaantaan kibirka badan inta wiilkeeda kibirka ka badiso ayey hadana isi suuxinaysaa, wallee iyada iyo wiilkaba anaa aqaan waxa aan ka sameynayo” halkaa ayuuna goodin ka sii waday oo uu weliba ku daray, “haddii ay i maqli waayaan iyagoo dhan Ayaan isaga dhex baxayaa, anigu inaan isla hadlo dalkaan uma soo doonan” Waa yaab! Su’aashuna wxa ay tahay yuu uga tegayaa Xassan reerkiisa? Yuu rabaa inay ilaaliyaan? Mase illowsan yahay waajibaadkiisa? Xaliimana isbitaalka ayaa loo qaaday, booliskiina waxa uu u sheegay inuu reerka dib ugu soo noqon doono marka Xaliima isbitaalka laga soo saaro.
Maalmo ka dib hooyo Xaliimo ayaa guriga loo soo celiyay, iyadoo baaritaan badan lagu soo sameeyay loona sheegay inay nasato oo wax kasta oo welwelin kara laga ilaaliyo. Isla maalintii ayey u billawday inay sidii hore guriga uga howl gasho iyadoon heysan oday u garaaba oo isagu ka xigsada xaaladda Maxamed oo hooyo xaliimo welwel badan ku abuuran una dheer yihiin ilmaha iyo guriga howshiisa kale. Balse siduu ballan qaaday, maalmo ka dib ayaa ninkii booliska ahaa guriga ku soo noqday oo uu kula kulmay Maxamed hooyadiis iyadoo Maxamed iyo aabihii maqan yihiin labadooduba. Ninkii Booliska ahaa ayaa u sheegay Xaliima in Maxamed la socdo ilmo ka waaweyn oo ay maalin kasta marka ay baxaan ay dukaamada xaafadda iyo suuqa ka xadaan alaabo oo mar kasta laga soo dacwoodo. Haddii aad celin weydaan waxaan ka mamnuuceynaa inuu dukaamada iyo suuqa aado haddii uu amarkaas jebiyana waan xiri doonnaa ayuu askerigii hadalkiisa ku soo dhameeyay. Waxa uuna Xaliimo uga tegay warqad inta uu sheegay ku qoran tahayna, oo uu ku yiri fadlan wiilkaada la soco waxa uu sameynayo iyo waxa ficilladiisa ka dhalan kara.
Hooyo Xaliimo ayaa markii uu askerigii ka tagay billowday inay iska oydo oo weliba ku catawdo, bal haddii uusan heysan aabo daryeela oo ka warqaba wiilkiisa maxaan sameeyaa? Haddii uu agoon ahaa lahaa ayaaba la ii qaatay oo waan garowsan lahaa qadarta alle, ee sideen uga sabraa aabo nool balse aanan waxba dhaamin mid dhintay, ilaahow ii gargaar ayey hadalkii ku soo gabagabeysay. Iyadoo quusatay oo ay labada gacmood daamanka ku haysa ayaa waxaa guriga soo galay Maxamed oo la cerysanayo oo ay ka daba ordayaan ilmihii ka waaweynaa oo uu raaci jiray. Markii uu guriga soo galay ayey ilmihii ka hareen, isla markiiba qolkiisa ayuu horay u galay. Hooyo Xaliimo ayaa qolkiisa ugu gashay oo tiri, maxaa dhacay? Waxa uu uga sheekeeyay wixii dhacay oo waxa uu u sheegay in labo ka mid ah isugu tageen balse uma uusan sheegin sababta keentay in la isugu tago. Isla markiiba hooyo Xaliimo iyadoon sii warsan ayey u sheegtay in uu askeri guriga yimid oo uu warqaddaan uga tegay. Markii uu Maxamed arkay waxa warqadda ku qoran uu ooyin billaabay oo uu hooyadiis u sheegay in la xiri doono waayo dukaan ay hadda wax ka soo xadeen ayey isaga iyo wiilasha kale kala qeybsigoodii isla fahmi waayeen oo ay ku dagaaleen, booliskuna hadduu u imaanayaa oo marka ay maqlaan inaan mar kale denbigaan sameeyay sida ay sheegeenna waa I xiri doonaan. Maalintaas galabnimadeedii ayaa Maxamed isagoo guriga ku jira oo aan bannaan aadi Karin oo ka cabsanaya wiilashii kale ayaa boolis gurigiisa ugu yimid oo laga helay gurigiisa wixi uu ka soo xaday dukaanka, halkaas lagu watay oo boolisku xarunta booliska ugu kexeeyeen oo dacwo lagu oogay oo isaga iyo kuwii ka waaweynaa maxkamad ku muteysteen, oo weliba wiilashii waaweynaa qaar maalmo ka dib lagu xukumay xabsi halka maxammed iyo kuwo da’diisa oo kale ahna laga mamnuucay inay suuqa iyo dukaamada tagaan.
Akhriso Qaybta 3aad